Iinyawo ezinentlabathi - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMauricio
Indlu entle engaselwandle, amaxesha amane onyaka. Inamagumbi okulala ayi-3, igumbi lokuhlambela eliyi-1, igumbi lokutyela eliyi-1, ikhitshi eliyi-1 eline-hob neoveni eyakhiwe kuyo yonke i-ceramic efudumeleyo. Inophahla olunetafile yaseverandeni kunye ne-bbq. Imigangatho ngamaplanga aqinileyo.
I-Le Marais Estate Beach House
Ngokuthe ngqo kunxweme lwaseDomaine du Marais!
Unxweme lwabucala olwenzelwe wena, uxolo, uwedwa, njengabantu abathandanayo okanye intsapho yabantu abayi-8. Umthandi wokuloba iLake St-Jean bubukhosi be-offaniche kunye negolide. Ukuloba kuvumelekile ukusuka elunxwemeni. Ukutshona kwelanga okhe wakubona!
Ngaba ufuna iholide yosapho ekwenza uzive uthe zava ekhayeni lakho kungekhona kwigumbi lasehotele ? Ufike kwindawo efanelekileyo.
4.89 · Izimvo eziyi-39
Ubusika: ukuhamba ngekhephu phambi kwendlu, ukuba nokwenzeka kokuhamba ngekhephu echibini kwiindlela eziphawulweyo. Ukutyibiliza kwilizwe liphela, ukutyibilika ezantsi kwentaba ngaphakathi kwemizuzu eli-10.
Ehlotyeni, ekwindla yasentwasahlobo: Ukuloba "iintlobo ezingama-27 ezahlukeneyo" ukuhamba ngenqanawa echibini, ukuqubha, ukukhwela ibhayisekile kwindlela yeblueberry ejikeleza ichibi elingama-275 km. Ilali yaseVal Jalbert, umngxuma wentsomi, umqolomba oyintsomi!
Ngexesha lokuhlala kwakho sihlala sifumaneka ngokupheleleyo ukomeleza amava akho ngokukucebisa ngezinto ezinomtsalane ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka.